Itaipu, Itaipu - Ciudad del Este
Amerika Atsimo Paraguay Ciudad del Este
Adiresy: Avenida Tancredo Neves, 6.731, Foz do Iguaçu - PR, 85856-970
Phone: + 595 61 599 8094
Daty nanokafana: 1984.
Ny ora fiasana: 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro
Haavo: 196 m
Ny halavan'ny tohatra: 7235 m
Tamin'ny 2016, Itapu HPP dia namokatra maherin'ny 103 miliara kilao-ora famoahana herinaratra, ary izy no hany hery mpamokatra herinaratra mpamokatra herinaratra eto amin'izao tontolo izao izay nahatratra ireo famantarana ireo. Ity zava-misy ity dia tsy isalasalàna fa nahaliana ny orinasa mpamokatra herinaratra sy fanontaniana maro: aiza ny toerana misy an'i Itaipa HPP? Inona avy ireo halavany? Aiza no mandeha ny herin'aratra?
Ny Itaipu HPP mahery vaika manerantany dia ao amin'ny reniranon'i Parana - eo amin'ny sisin-tanin'i Brezila sy Paragoay , 20 km miala ny Foz do Iguaçu, tanàna malaza mpizaha tany malaza, "tanàna telo sisika", izay misy an'i Brezila, Arzantina sy Paragoay. Noho io, ny Itaipa HPP dia mora hita ao amin'ny sarintany.
Ny toetran'ny tohodrano sy toeram-pamokarana herinaratra
Ny tohodrano Itaipu dia natsangana teo amin'ny "fototra" nosy teo am-bavan'i Parana, ho fanomezam-boninahitra ny anarany. Amin'ny dikanteny avy any Guarani dia midika hoe "vato vato". Ny asa fanomanana ny fanorenana dia nanomboka tamin'ny 1971, saingy tsy nanomboka ny asa hatramin'ny 1979. Tao anatin'ilay vatolampy, nisy lakandrano 150 metatra nopetahana, izay nanjary fantsona vaovao tao Parana, ary taorian'ny nanombohan'ilay renirano maintitra dia nanomboka ny fanorenana ny tobin-tsolika.
Rehefa najanona izy dia efa nesorina ny 64 metatra sy 3 kilaometatra kilaometatra ary vato ary 12,6 tapitrisa kibika metatra ary 15 tapitrisa ny tany. Voky ranom-boasary ny ranom-boasary tamin'ny taona 1982, ary tamin'ny taona 1984 dia notaterin'ny mpamokatra herinaratra voalohany.
Manome 100% ny Paraguay amin'ny herinaratra izany, ary mahafa-po kokoa ny 20% amin'ny filàn'i Brezila. Ny famokarana dia manana generate 20 izay manana milina 700 metatra. Ny ankamaroan'ny fotoana noho ny fisondrotry ny famolavolana ny fahaiza-manaony dia 750 MW. Ny sasany amin'ireo generatera miasa amin'ny hafanana 50 Hz (natsangana ho an'ny tambajotra Power Paraguay), ny ampahany amin'izany dia 60 Hz (ny haavon'ny herinaratra ao Brezila); raha ny ampahany amin'ny angovo "novokarina ho an'i Paragoay" dia niova ary navotsotra tany Brezila.
Itaipu dia tsy ny foibem-pamokarana mahery vaika indrindra manerantany, fa iray amin'ireo rafitra roa lehibe indrindra koa. Ny tohodrano Itaipu dia mamely ny halavany: ny haavony dia 196 m, ary ny halavany dia mihoatra ny 7 km. HPP Itaipu dia mamoaka sary mahavariana na dia eo amin'ny sary ihany aza, ary ny hetsika "mivelona" tsy misy fanitarana dia tsy hay hadinoina. Ny tohodrano Itaipu ao Paraná dia miteraka fitahirizana, ny faritra misy dia 1350 metatra toradroa. km. Tamin'ny taona 1994, ny HPP dia noheverina ho iray amin'ireo zava-mahatalanjon'izao tontolo izao.
Ahoana ny famangiana HPP?
Afaka mitsidika ny tobim-pamokarana herinaratra any Itaipa ianao amin'ny andro iray isan-kerinandro. Ny fitsangatsanganana voalohany dia atao amin'ny 8:00, avy eo isaky ny ora, manomboka amin'ny 16:00 ny farany. Ny fitsangatsanganana dia ahitana koa ny fijerena sarimihetsika kely milaza ny fanorenana sy ny fikarakarana ny tohodrano. Afaka miditra an-dalam-be ianao amin'ny maha-vondrona efa antitra iray, na tsy miankina, fa amin'ity farany ity dia tokony hanana pasipaoro na antontan-taratasy hafa.
Ny fitsidihana an'i Itaipu dia maimaimpoana. Tokony hanao kiraro matanjaka, na dia tsy dia mpizaha-mandeha aza ny fitsangatsanganana - ary mitondra bisy manokana ny mpitsidika. Ankoatra izany, hahita ny efitranon'ny mpamorona ny 139 km eo ambany ranomasina.
Ao amin'ny toeram-pitrandrahana ala mikitroka, ny tranombakoka Guarani Itaipu dia miasa. Azonao atao ny mitsidika azy hatramin'ny talata ka hatramin'ny alahady amin'ny 8:00 hatramin'ny 17:00. Mba hahatongavana any amin'ny tranombakoka dia mila manana antontan-taratasy miaraka aminao ihany koa ianao.
Ny lapan'ny arsevekan'i Lima
Ny Museum Anda 1972
Toerana nasionalin'i Los Alerses
Maraoka marbra (Chili)
Manicure ho an'ny taona vaovao 2016
Fialan-tsasatra any Malezia
Fanamboaran-trano misy ravin'olom-bolo ho an'ny efitrano fisakafoana amin'ny fomba fanao malaza
Ny menaka mahafinaritra ataon'ny vehivavy
Phantom - ahoana ary ny fomba hiantsoana izany?
Navoakan'i Kim Kardashian ny sarin'i Saint Whyte, mena mainty hoditra
Pumpkin casserole miaraka amin'ny akoho
Inona no nofinofin'ny tondradrano?
Ahoana ny fisafidianana milina fanasana?
Zavamaniry misy kofehy marevaka 2015
Fampidinana amin'ny onkologie - vokany
Catarrhal angina amin'ny ankizy - fitsaboana
Ny andraikitry ny vady
Fifandimbiasan'ny coccyx - soritr'aretina sy vokany
Ny akanjom-behivavy jirobe
Inona ny nofinofy efa maty?
Emma Stone dia niresaka momba ny fomba niasany tao amin'ilay sarimihetsika "La La Land" sy ny zavatra nifanaraka tamin'ny toetrany
Ahoana ny fomba hanamboarana ovy?
Earrings amin'ny vato
Chloe Moretz sy ny sipany